Dawlada Jabuuti Oo Xil u Magacawday Orodyahanka Caalamiga Ah Ee Mo Faarax | Marsa News
Dawlada Jabuuti Oo Xil u Magacawday Orodyahanka Caalamiga Ah Ee Mo Faarax
October 16, 2020 - Written by editor marsan
Hargeisa:(Marsanews) Orodyahanka Caanka ee u orda dalka Britain asal ahaana Ka soo Jeeda Soomaaliland iyo jabuuti labada dalba, ayaa Mo Farah Xukuumada Dalka Jabuuti u magacawday safiirka Waaxda Dekadaha iyo Aaagagga Xorta ah ee Jabuuti, ka dib markii ay Jabuuti dekadda dalkaasi u beddeshay midka ganacsiga Xorta ee ka caagan cashuuraha.
Haayada ku shaqada leh dekedaha jabuuti iyo aaga waaxda cashuuraha ka caagan ayaa ka hadashay magacaabista Mo Faarax loo magacaabay safiirka waaxda dekedaha jabuuti
“Waxaan ku faraxsannahay inuu Mo Farah nagala soo qeyb galo Dib u habeynta Dekadda Jabuuti. DPFZA waxay ku faraxsan tahay in mudane Mo Faarax uu noqdo safiirkeenna waxaananu rajeyneynaa in mustaqbalka kala shaqey doono mashaariicda.” Ayay waaxdu ku soo qortay barteeda Twitter-ka.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo dhawaan daah furay munaasabadda dib u habeynta dekaddaha jabuuti ayaa sheegay in dekaddaasi laga dhigi doono degmada ganacsiga Bariga Afrika oo dhan xidhiidhin doonta.